« Tsy nisy ny namoy ny ainy », hoy ny filoha: niampy 5 indray, tafakatra 17 ireo tratran’ny Covid-19 | NewsMada
Nampitony saina ny rehetra ny filoha Rajoelina, omaly, tamin’ny alalan’ny hafatra sy fampitam-baovao nataony. Nohamafisiny àry fa ”tsy mbola misy ireo namoy ny ainy, hatreto”. Na izany aza, nambarany fa niampy dimy indray, hatry ny omaly, ka tafakatra 17 ireo tratran’ity aretina coronavirus ity.
« Misy olona dimy vaovao indray natao fitiliana ka mitondra ny Coronavirus izany hoe olona 17 no mitondra izany rehefa azo ny antontanisa… Nitombo isan’andro ny tratrany », hoy ny filoha Rajoelina, omaly tao amin’ny TVM/RNM. Nanteriny hatrany fa ilaina ny fahaizantsika mifehy tena mba tsy hampihanaka azy io. Notsiahiviny fa iray fiaramanidina avokoa izy ireo ary niara-nipetraka. Niparitaka ilay aretina ka tsy maintsy natao fitiliana avokoa izy ireo. Misy salama amin’izy ireo ka mety tsy mbola ho hita ilay aretina. Herinandro mahery vao fantatra fa mitondra Coronavirus ka tsy tokony hivoaka ny tokantrano, mandritra ny 15 andro, araka ny nambaran’ny filoha.
Niaiky ny filoha fa tsy hita na nitsoaka ny sasany amin’ireo. « Havantsika ireo ka tsy azo atao ny manary azy. Tsy aretina mahamenatra io fa iarahan’izao tontolo izao miatrika. Mila manaraka ny fitsipika. Natokana ny nametrahana azy eny Anosiala sy CNaPS Vontovorona izy ireo. Nalefa amin’ny hotely ireo tonga farany », hoy ihany ny filoha.
Fanafody sy raokandro ary sarom-bava…
Na izany aza, natsidiny sahady fa efa misy ny fanafody nahomby tany amin’ny firenen-kafa ary misy kojakoja sy fitaovana samihafa ho an’ny fitsaboana haparitaka amin’ny hopitaly. Eo koa ny nifampiresahany tamin’ireo profesora sy manampahaizana malagasy ka nilazany fa hita eto avokoa ireo akora mety hiadiana amin’ny Covid-19. Anisan’izany ny raokandro ho an’ny hery fiarovana. Manampy izany ny sarom-bava anetsiny ho an’ny mpitandro filaminana sy mpitsabo ary koa ny mpiasam-panjakana. « Natao hifehezana izany izy io ary vonona hiatrika fahavalo tsy hita maso… Hanao ny ezaka rehetra hiarovana ny ain’ny Malagasy isika… », hoy ihany izy.
Mangaraharaha sy ny marina
Nankasitraka ireo nanaraka ny fitsipika napetraka, tsy nafahana nivezivezy be loatra tsy hampiahana ny valanaretina, nanomboka omaly, ny filoha. Notsarovany manokana ilay dokotera malagasy niasa tany amin’ny hopitaly any Frantsa, namoy ny ainy noho io aretina io.
Nanteriny fa ilaina hatrany ny mangarahara sy ny marina ka tsy misy afenina ny vaovao rehetra momba izany.
Zotra MD 051
Namoaka fanambarana ny tompon’andraikitra fa tokony hiantso maika ny laharan-telefaonina 914 ireto mpandeha tamin’ny zotra MD 051 avy any Paris, tamin’ny 18 mars 2020 ireto. Niangaviana koa izy ireo hanatona ny mpitandro filaminana na tobim-pahasalamana akaiky azy indrindra. Avy eto Antananarivo sy ny manodidina ny maro amin’izy ireo. Eo koa anefa ireo avy any amin’ny faritra. Na izany aza, lisitra farany hatramin’ny fotoana nanoratana, ireto ka mety efa misy fiovana.
-Ahmed Ahmed Ali (Tana M Hotel)
-Halier Jean François (Toliary)
-Rasoarimalala Evelyne (Ampamarinana – Antananarivo)
-Noguer Jaine (Andaboly Toliara)
-Benjanon Vainchtein (Matsabory Ambatoloaka)
-Dumand Patrica Chantal (Madirakely Nosy Be)
-Beria Henri (67 ha Atsimo Antananarivo)
-Allano Aurore Mahery Marion (Ankadilalampotsy Ankaraobato)
-Leante Bazatry Clairette (Ankadilalampotsy Ankaraobato)
-Rakotoarimino Sherridan (Taolagnaro)
-Kessaria Novraly (Anosizato)
-Abassbaay EpIlessaria Fatema (Anosizato)
-Karim Salime Nazaraly (Ambodivona Antananarivo)
-Ratsimamanga Ratsitoarison (Ambatobe Antananarivo)
-Dumand Claude Emile (Madirakely Nosy Be)
-Rasoanambinina Baovola (Ambatobe Antananarivo)